Ọrụ Nchedo Onyinye Aka na Inyocha
Chedo akụ nke onwe gị na ụgwọ azụmaahịa, esemokwu ndị mmekọ, ikpe, mkpebi na ọbụnadị ịgba alụkwaghịm. Anyị na-enyere gị aka ịmalite azụmahịa, tolite azụmaahịa gị ma chekwaa ihe kachasị mkpa, akụ onwe gị ị na-ewebata site na oganihu gị.
Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ nchekwa nchekwa bara ụba na ụgbọ ala nke na-amalite site na ihe nzuzo ma gaa ruo oke atụmatụ atụmatụ ntụkwasị obi nke oke osimiri. Ihe ibido n’ichekwa akụ na ụba ọ bụla bụ imepụta ngalaba iwu dị iche iche iji chekwa akụ nke onwe gị ka ọ dịrị na nsogbu.
Polọ ọrụ na LLC bụ ụdị nchebe kachasị na nchekwa nke ọrụ azụmaahịa na-echebe akụ nke onwe onye nke azụmahịa site na ụgwọ na ụgwọ nke azụmaahịa - mkpuchi mkpuchi ụlọ ọrụ bụ nchekwa mbụ nke nchebe nke ndị ahịa.
Nzuzo ego na nzuzo nke inwe na-enyere aka belata ohere nke ịbụ onye a ga-elekwasị anya na mkpesa jọgburu onwe ya. Anyị na-enye ọrụ nzuzo mgbe anyị na-eme azụmahịa ọhụrụ dị ka mmemme kwa afọ na ntụkwasị obi ala na-enye ndị nwe ụlọ aka ịhapụ ịkọ ụlọ maka aha ntụkwasị obi. Nzuzo nke ndi mmadu na nchedo site na ulo oru na emeputa nchebe siri ike.
Enwere ụdị ntụkwasị obi dị iche iche na-echebe akụ site na ikpe. A na-echekwa akụ na ụba n'ime ntụkwasị obi maka ebumnuche ụlọ site na ikpe onwe onye megide onye na-erite ntụkwasị obi.
Nchedo nke ikpé
Iwu kachasị ike iji chekwaa akụ gị na-abịa n'ụdị ntụkwasị obi tụkwasara obi. Emebere ntụkwasị obi nchekwa bara ụba bụ nke enyere iji chebe akụ na ụba ya ka ọ dị ugbua ebe mmadụ nwere ike idozi ma rite uru site na ntụkwasị obi.
Ngwaọrụ ndị a amachaghị nke ọma ma dị n ’imezi ụlọ na nke ikuku. Anyị bụ ndị ọkachamara n'ịtọlite ​​ụgbọ ala nchebe na ngwa iwu iji chebe ngwa ahịa gị.
Nchekwa Akpa Nchekwa
Otu ụzọ kachasị mma iji chebe onwe gị pụọ na ikpe bụ site na ịtọọ ntụkwasị obi nchekwa nke akụ. O di nwute, ntụkwasị obi ụlọ enweghi ezigbo ihe ndekọ egwu. Ndị tụkwasara obi n'okirikiri, n'aka nke ọzọ, nwere ụfọdụ ihe kachasị mma gbasara nchekwa iwu nchekwa akụkọ. A Cook Islands tụkwasịrị obi yana ntụkwasị obi Nevis nwere uzo abuo kacha mma.
A na-ahapụkarị ndị IRA ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ na ikpe. Agbanyeghị, nchebe ha nwere oke. Na mgbakwunye na enwere obere nchebe IRA na ịgba alụkwaghịm ọ gwụla ma iji ngwa iwu dị mma. Na Nchedo Iwu IRA Site na Steeti, ị ga-agụ ka esi chekwaa IRA gị na ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ nke ikpe.
Enweghi ikike Mmekorita Ikikere
Ntụkwasị obi na Ndụ